ओलिमा डेज हैक 🥇 धोखा दिन्छ, एम्बोट, ईएसपी, वालह्याक - गेमप्रॉन
ओलिमा Dayz ह्याक
हाम्रो DayZ ओलिमा हैकको साथ, तपाईं दुबै जोब्बी र प्लेयरहरू जित्न सक्नुहुन्छ!
पैसा किन्न सक्ने उत्तम ह्याक्समा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्, यहाँ छ! आज एक १-दिन उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
Gamepron एक कारणको लागि DayZ ह्याक्सको अग्रणी प्रदायक हो - आज १ हप्ताको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
तपाईंले अझ लामो पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंले त्यसो गर्न छनौट गर्नुपर्दछ! आज १-महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
DayZ ले तपाईंलाई धेरै फ्याँक्न गइरहेको छ, जुन नयाँ खेलाडीहरूको लागि ठूलो लाग्न सक्छ। चाहे तपाइँ खेलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा केवल थोरै "बूस्ट" चाहिएको छ, तपाईं हाम्रो DayZ Olima ह्याकमा भरोसा दिन सक्नुहुन्छ! तपाईंलाई गेमप्रोनबाट मद्दत लिनुहोस्।
Dayz ओलिमा हैक जानकारी
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि भर्चुअलाइजेशन हुनै पर्छ जब तपाईं हाम्रो ह्याक्सको ओलिमा संस्करण प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, हाम्रो डेज चीट्स पनि। हाम्रो DayZ Olima ह्याक प्रयोग गरेर तपाइँको हातहरू चीट्समा प्राप्त गर्ने सही तरिका हो जुन तपाइँको FPS लाई नष्ट गर्दैन, किनभने सबैजना खेल खेल्नका लागि शक्तिशाली कम्प्युटरसँग काम गरिरहेका छैनन्। यदि तपाईंसँग केही हदसम्म "कमजोर" कम्प्युटर छ वा केवल सम्भव भएसम्म उच्चतम एफपीएस प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो डेजेड ओलिमा ह्याक प्रयोग गरेर आश्चर्य कार्य गर्दछ! तपाईं स्टीममा खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वा एक्लो स्ट्यान्डमा र अझै हाम्रो DayZ ह्याक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो डेजेड वालह्याकले दुश्मन र आइटम ईएसपी प्रदान गर्दछ, साथै ईएसपी जानकारी (जस्तै दूरी, स्केलेटन, कपडा, हतियार, एम्मो, फूड, र मेडिसिन)। DayZ Aimbot पनि अचम्मको छ र छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू देखाउँदछ, जस्तै हड्डी प्राथमिकता र समायोज्य FOV सर्कल। Gamepron को साथ अधिक प्रगति हेर्नुहोस्!
शत्रु जानकारी (दूरी, लामबन्दी, स्थान)
वस्तु ESP (दूरी, कपडा, हतियार, Ammo, खाना, मेडिकल, पाल, ब्यारेल)
एम्बोट (दूरी, कुञ्जी, हड्डी)
Dayz Olima को बारेमा
हाम्रो डेजेड ओलिमा ह्याक अहिलेको अन्य बजारमा रहेका डेजेड ह्याक्स भन्दा धेरै राम्रो छ, र यो हामीले यसमा राखेका सबै कामका कारण हो। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यौं कि यो धोखा हाम्रा सबै नौसिखाहरूका लागि एकदम सरल र सीधा थियो, त्यसैले यो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छ - तपाईं यो स्ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुनेछ जब यो ह्याक सक्षम पारिएको छ, किनकि तपाईंको दर्शकहरूले चिया सक्षम देख्न सक्षम हुनेछैनन्। DayZ ह्याक बाह्य हो र तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न संरक्षणहरू असक्षम गर्न आवश्यक छ, अन्यथा झूटा फ्ल्यागले उपकरणलाई काम गर्नबाट रोक्न सक्छ।
किन अन्य प्रदायकहरूमा डेज ओलिमा प्रयोग गर्ने?
यहाँ गेमप्रोनमा रहेको गुणस्तरको लागि कुनै मेल खाएन, र त्यसैले किन हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको डेजेड ह्याक आवश्यकताहरूको लागि अन्यत्र खोजीरहेका छैनन्। जब तपाईं हाम्रो उपकरणको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले हामीले प्रदान गर्ने गुणस्तरको प्रकार बुझ्नुहुन्छ, तपाईं अरू कतै हेर्न चाहनुको कुनै कारण छैन! हाम्रो डेजेड ओलिमा ह्याक सक्रियको साथ तपाईं पूर्ण स्क्रीनमा डेजेड पनि खेल्न सक्नुहुनेछ, जुन धेरै प्रदायकहरूले आफैंलाई वितरित गर्न सक्दैनन्। तपाईका खाताहरू सँधै सुरक्षित हुन्छन् जब तपाई गेमप्रोनबाट ह्याकहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो सबै चिटहरू भेट्टाइएनन् र तपाईंलाई प्रत्येक पटक प्रतिबन्ध हटाउन मद्दत गर्दछ।
तपाईको अधिक हेर्न चाहानु हुने परिवर्तनहरू गर्न हाम्रो सहज अन्तर्-गेम मेनू प्रयोग गर्नुहोस्! तपाईले स्टक सेटिंग्समा सम्झौता गर्नुपर्दैन जुन हामीसँग हाम्रो डेजेड ओलिमा हैक हो, तपाईले आफ्नो हातमा मामिला लिन सक्नुहुन्छ - इन-गेम मेनू प्रयोग गरेर तपाईलाई हाम्रो सबै डेजेडमा उडान समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। ह्याक सुविधाहरू तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ कति चाँडो Aimbot ले शत्रुहरू लक्षित गइरहेको छ, वा भर्खर मात्र टगल गर्नुहोस् कुन ESP विकल्पहरू तपाईंले आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ। छनौटहरूको स see्ख्या लाग्दो अन्तहीन देखिन्छ, त्यसैले इन-गेम मेनूको साथ वरिपरि खेल्नुहोस् र उत्तम मिश्रण फेला पार्नुहोस्!
A6। हो, यसले पूर्णस्क्रिन मोडलाई समर्थन गर्दछ।
हाम्रो सबै उपकरणहरू प्रयोगको क्रममा पत्ता लगाउन रहनका लागि अनुकूलित छन्, त्यसैले तपाईं प्रतिबन्धित हुनुको बारेमा कहिल्यै चिन्ता लिनुपर्दैन। सुरक्षा प्राथमिकता हो जब तपाईं गेमप्रोनसँग ह्याक गर्न रोज्नुहुन्छ!
मोल्ड तोड्नुहोस् र स्मार्ट तरीकाले डेजेडमा ह्याक गर्नुहोस्! आज एउटा कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्
गर्न तयार प्रभुत्व जमाउनु हाम्रो Dayz ओलिमा हैक संग?